Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguSupriya
Iindwendwe ezithandekayo ezilindelekileyo : Wamkelekile ukuba ubhukishe kwaye wonwabele ubume bekhaya lam kwaye ube nexesha elitofotofo nelipholileyo apho. Nangona kunjalo, nceda uphathe le ndawo ngentlonipho enkulu kwaye uyishiye icocekile kwaye icocekile njengoko uyifumana xa ungenile. izitya ezisetyenziswe kuyo yonke indawo. Nceda ugcine oku engqondweni ukuba uthatha isigqibo sokubhukisha indawo. Kungenjalo kokwakho konke ukonwabela!
IKhushi yindlu yamagumbi okulala ama-4 ephangaleleyo kufutshane nesikhululo seenqwelomoya kunye nesikhululo sikaloliwe ngokunjalo nakwii-ofisi ezibalulekileyo, izikolo, imarike, njl. Indawo icocwa ngokucokisekileyo emva kokuba luhambe undwendwe nangaphambi kokuba kufike olulandelayo. Ibekwe kwindawo yokuhlala ezolileyo kwaye akukho siphazamiso sisuka kwitrafikhi okanye ngenye indlela. Iindwendwe ngokubanzi ziyayithanda i-ambience kwaye sivuleleke kwiingcebiso.
4.79 ·Izimvo eziyi-67
4.79 · Izimvo eziyi-67
Lo mhlaba usembindini oneeofisi ezininzi kunye neemarike kumgama oziikhilomitha ezi-5.
Umbuki zindwendwe ngu- Supriya
Siyafumaneka kwifowuni kwiindwendwe zethu ngexesha lokuhlala kwazo kuyo nayiphi na imibuzo, uncedo, okanye ulwazi. Yaye xa ixesha livuma, siye sidlule ukuze samkele iindwendwe zethu yaye maxa wambi side sizimeme ukuba zize kuphunga iti!! 😊